आज, लगभग हरेक आधुनिक घर अगाडि सेट doorbell, अतिथि को आगमन को मालिक सूचित जो माधुर्य। यसको आविष्कार हुनाले यसलाई सय एक अधिक वर्ष पुरानो भएको छ, र तब देखि यो आवश्यक सहायक बिना कुनै पनि एक परिवार गर्दैन। यो उपकरणको उद्देश्य सरल फिड बटन थिचिएको बेला चर्को राम्रो देख्न सकिने ध्वनि छ।
कस्तो छ र यो कसरी बिजुली ढोका घण्टी काम गर्दछ?
राम्रो यो सरल उपकरणको संरचना बुझ्न, तपाईं आफ्नो मुख्य संविधान भागहरु परिचित गर्न आवश्यक छ। यस्तो कल बिजुली आपूर्ति लागि जिम्मेवार एक तत्व हुन्छन्; बटन; पानीका मुहानहरू; सम्पर्क; कप; एङ्कर; हथौडा र विद्युत चुम्बक। सोही, विद्युत चुम्बक सबैभन्दा आधारभूत तत्व, संकेत फिड को उपस्थितिको कारण उत्पादन जो छ।
यस यन्त्रको सञ्चालनको सिद्धान्त अति सरल छ। Doorbell तार प्रकाशित एउटा यन्त्र हो बीप energized गर्दा। एक आपूर्ति श्रृंखला बन्द गर्न, तपाईं एउटा बटन थिच्नुहोस् गर्न आवश्यक छ। यो विभिन्न स्थानहरूमा तत्व को सम्भव विविधता छ महत्त्वपूर्ण त्यस्तो उपकरणहरू पनि छ। कल बटन अगाडि ढोका मा, बाहिर मा स्थित छ, र त्यो घर भित्र छ। बंद र क्षेत्रीय को उद्घाटन कारण नै विद्युत चुम्बक को उपस्थितिको हुन्छ।
मुख्य फाइदा र बेफाइदा
मानक वायरलेस doorbell बटन खोल्छ वा बजर सर्किट बंद छ। अगाडि ढोका - कोठा र बाहिर स्थित एउटा यस्तो यन्त्रको भित्री एकाइ। एक तार आवश्यक छ, पर्खाल मा drilled एक प्वाल बिछाउने लागि आवश्यक छ, जो मा यी दुई भागहरु जडान गर्न।
यी उपकरणहरू को बेफाइदा कल बटन तल हो कि सम्पर्क छ भन्ने तथ्यलाई छ उच्च भोल्टेज र अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकता। यस्तो उपकरणहरू माउन्ट मोटा तार प्रयोग को आवश्यकता द्वारा जटिल छ। यी doorbells बारम्बार मर्मतका आवश्यक छैन र लामो सेवा जीवन तथ्यलाई तापनि तिनीहरू बिस्तारै आफ्नो लोकप्रियता, अझ आधुनिक वायरलेस मोडेल तरिका दिने गुमाउन।
एक बिजुली घण्टी कसरी चयन गर्ने?
तार सकेसम्म लामो समयसम्म तपाईंलाई सेवा doorbell गर्न, यो चयन गरिएको छ जब तपाईं केही सरल निर्देशन पालना गर्नुपर्छ। यस्तो उपकरणहरू विशेष स्टोर आवश्यक खरीद। अनुभवी बिक्री तपाईं एक विशेष मोडेल को विशेषताहरु बुझ्न मदत गर्नेछ, र सबै भन्दा राम्रो विकल्प चयन गर्नुहोस्।
जब उपकरण छनौट यो सुन्न पर्छ। doorbell ध्वनि मानक वा केही धुनहरू रूपमा हुन सक्छ। ठूलो कोठा अगाडि स्थापनाका लागि उपकरण को मात्रा, यो घर को हरेक कुना सुनेको गर्न सकिन्छ भनेर पर्याप्त हुनुपर्छ।
तार घण्टी, सुसज्जित एक इलेक्ट्रोनिक ध्वनि बिजुली संग
यस्तो उपकरणहरू मा ध्वनि स्रोत सफलतापूर्वक कचौरा संग परम्परागत चुम्बक प्रतिस्थापन, एक वक्ता छ। यो योजना अन्तर्गत काम भन्दा आधुनिक मोडेल। वक्ताले पूर्व-प्रोग्राम धुनहरू प्रकाशित गर्न थाले गर्न, विभिन्न आवृत्तियों को कंपन यसलाई खुवाउनुभयो। जो मामला मा तपाईं doorbell ध्वनि रोज्न सक्नु हुनेछ। यो लोकप्रिय संगीत को एक शान्त गूंज वा व्याख्या हुन सक्छ।
यस्तो यन्त्र कल मा पावर बटन छैन, तर केवल सञ्चालन मा सर्किट चल्छ। रुचि भएकाहरूलाई, कति तार मोडेल को मूल्य दायरामा कि 300 देखि 1000 rubles प्रतिक्रिया एक कल छ। यो सबै अतिरिक्त सुविधाहरू को उपलब्धता मा निर्भर गर्दछ।
प्रोग्रामयोग्य Doorbell वायर्ड
यी उपकरणहरू लाभ सहित एक नम्बर प्रस्ताव:
पारंपरिक घण्टीको प्रतिस्थापन गर्न सक्छ कि ध्वनि सबै किसिमका उपस्थिति;
बटन मा उच्च भोल्टेज को अभाव;
लम्बाइ र घन्टी मात्रा समायोजन गर्न सक्ने क्षमता।
यो सूची हामीले बटन थिचिएको छ जब एक विशिष्ट लय चयन गर्ने क्षमता प्ले गर्न थप्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक पछि अहम लागि सरल मोडेल पूर्णतया नयाँ माधुर्य ध्वनि हुनेछ। नयाँ उपकरणहरू स्वतन्त्र इच्छित मोड (नरम, सामान्य वा सुरक्षा) प्रदर्शनी गर्न सक्नुहुन्छ। यो घण्टी आवास मा माउन्ट बटन प्रयोग गरेर गरिन्छ।
उपकरण स्वयं सञ्चालित छ
मिति, तार कल केही मोडेल ब्याट्री मा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो उपकरणहरू पनि बिजुली को अभाव मा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। मात्र कुरा हामी बिर्सन हुँदैन - यो फिडर तत्व को नियमित प्रतिस्थापन छ। नियम, ब्याट्री को एक सेट छ महिना, एक सामान्य कल कामको लागि रहन्छ। सामान्यतया, यी आत्म-समावेश मोडेल सीधा अगाडि ढोका माउन्ट छन्।
स्पर्श संवेदनशील बटन र आवाज संचार संग तार कल
को पसलहरूमा आज अक्सर सुधार मोडेल देख्न सक्नुहुन्छ एक औंला को एक सरल स्पर्श द्वारा सक्रिय छ। यी कल मा सम्पर्क संग एक यांत्रिक प्रणाली छैन। जो चाहनुहुन्छ ती सेन्सर गर्न एक कल, यो यस्तो मोडेल लागि मूल्य परम्परागत बटनबाट धेरै फरक छैन भने हुनुपर्छ कति थाहा। यो ती सबै भन्दा एक बाध्यकारी न्यूनतम संग एक ट्रांजस्टर मा निर्मित छन् भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
बरु क्लासिक घण्टी भन्दा बढी intercoms जस्तै आवाज संचार संग सुसज्जित उपकरणहरू। यस्तो उपकरण क्लिक, तपाईं ठीक एक बन्द ढोका अन्य पक्षमा छ जो सधैं बाहिर पाउन सक्नुहुन्छ।
एक doorbell कसरी स्थापना गर्ने?
यसलाई यो पहिलो नजर मा जस्तो हुन सक्छ भन्दा धेरै सजिलो बनाउँछ। पारंपरिक तार मोडेल दुई उत्पादन शक्ति छ। तिनीहरूलाई बाट बटन र तार जडान गर्न दुई तार ल्याउन आवश्यकता छ विद्युत प्यानल।
प्रारम्भिक चरण मा यो उपकरण नै स्थित छ जसमा स्थान निर्धारण गर्न आवश्यक छ। कल बटन अनुमार्गण कंडक्टर सीमित गर्न, यो अगाडि ढोका को शीर्ष वा पक्ष सेट गर्न सिफारिस गरिएको छ। तार मोडेल को स्थापना को लागि, तपाईं इन्सुलेट टेप, तार cutters, संडसी, ठीक र आवश्यक हुनेछ सूचक पेचकस। दुई-कोर पृथक तार संपर्क-बाहिर उठाउन गर्न, यो ढोका फ्रेम मा एक प्वाल ड्रिल गर्न आवश्यक छ। तार बाहिर स्थित घण्टी बटन को टर्मिनलहरु जोडिएको हुनुपर्छ। बटन लागि जाँदा, त्यसपछि यसलाई सुरक्षित पर्खाल गर्न fastened गर्नुपर्छ।
त्यस अवस्थामा, ब्याट्री एकाइ छ भने, तार को अन्य अन्त मा ब्याट्री दुई टर्मिनलहरु जोडिएको हुनुपर्छ। यसलाई विभाजित गरिएको छ भने, घण्टी तार बटन गर्न घन्टी देखि विस्तार। यसबाहेक, केबल प्रत्येक पूर्व-कट अन्त टर्मिनलमा जोडिएको।
ट्रांसफर्मर गर्न कल जडान, तपाईं पहिले यसलाई जडान गर्नुपर्छ जंक्शन बक्स, र त्यसपछि तपाईँले माथि हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई राम्ररी संवाददाता भोल्टेज दिने, ट्रांसफर्मर जोडिएको रिङ टर्मिनलहरु गर्न अनुगमन गर्नुपर्छ। अन्तिम चरण मा घण्टी आवास स्थित टर्मिनलहरु गर्न तार सुरक्षित गर्न आवश्यक। तपाईं यो अघि, तपाईं ध्यान निर्माता को निर्देशन पढ्नुपर्छ। सामान्यतया, विस्तार निर्माताहरु र वर्णन अधिकतम उपलब्ध जडानहरू अल्गोरिदम।
र Janome 603 डीसी: विशेषताहरु समीक्षा र प्रशंसापत्र
छत कसरी रंग र उदास प्राप्त छैन
वालपेपर Vinyl र ऊन बनेको कसरी लागू गर्न
लगातार बलिरहेको आगोको भट्टी कसरी
संग्रहालय मुरमानस्क मा: एक अवलोकन
हलुआ फर्सी: नुस्खा
ग्याँस तात्कालिक पानी तताउने "Neva लक्स 5514": प्राविधिक विनिर्देशों